Matipi Ekubatsira Kupindirana ne hwiricheya Users
Muchinyorwa chanhasi, tichaenda pamusoro pemamwe matipi ekuti ungaita sei kusangana ne wiricheya mushandisi nekuti vamwe vanhu vanonzwa kuda kuziva kana paine nzira chaidzo dzekudyidzana nadzo. Zvino, unogona kunge watove newemumhuri kana shamwari yepedyo iri remara uye iri mu wiricheya ipapo iwe unotoziva nzira yekudyidzana nevashandisi asi iwe unogona achiri kuverenga chinyorwa ichi kuti uwane mamwe matipi.
Imwe yedzakanakisa nzira dzekubatsira iyo remara kusapaka mukati kuremara kupaka mavara nekuti ndizvo
kunyanya ivo. Nekuda kweizvozvo, zvinogona kukonzera dambudziko rakawanda kune mumwe munhu ari wiricheya kufanira kupaka mhiri kwemugwagwa kana iwe ukapaka munzvimbo yavo nekuti waida kuve padyo nemusuwo. Edza kusamisa pane ma hashtag kutenderedza yekumira yekumisikidza kana!
Edza kuvakwazisa kunge vaisave mu wiricheya. Kujekesa, usavabatise mumusoro kana vasingakwanise kufambisa maoko kana makumbo. Vakura vakuru havadi kubatwa-batwa mumusoro kunge mwana kana imbwa. Kana zvikaitika kuti vanokwanisa kufambisa maoko avo, saka munogona kutambanudza ruoko rwenyu kuti mugare muchibata ruoko kunyange vasingakwanise kufambisa maoko. Ivo vanozokoshesa iko kuyedza pachinzvimbo chekusaedza kuvakwazisa.
Ivo vanhu kune zvavanoda kuve mumagariro saka taura navo zvakare usangotaura kune mumwe wavo kana uchida kuvabvunza chimwe chinhu. Vabvunze kana usina chokwadi nezvechimwe chinhu kana iwe uchishanda kuresitorendi uye iwe usina zvigaro zvewiricheya wobva wabvunza mushandisi kana iyo nzvimbo kwaunoda kuvagarisa zvakanaka. Vanozonzwa kukosheswa.
Kunyangwe izvi zvichifanira kuve pachena, zvinofanirwa kutaurwa nguva dzose. Semuenzaniso, usakumbira mushandisi wewiricheya kuti abate imbwa yako pamakumbo ake kana iwe usingabvunze mumwe munhu asiri pachigaro. Mawiricheya inogona kudhura uye inogona kusvika zviuru zvemadhora zvinoenderana nemaitiro aunotenga. Mumwe haafanire kutamba achitenderera ne wiricheya nekuti unogona kukanganisa zvigadziridzo zvacho
Dzimwe nguva vanogona kunzwa sekunge ivo mutoro kune Enda panze ne uye vachanzwa sekuti havafanire kuenda, zvakadaro, zviri kwauri kana iwe uchida kuti vaende. Iwe unongofanirwa kubvuma kuti ivo vanozoona sei mamiriro acho ezvinhu. Mune mamwe mazwi, kusabatika kwemunhu hakunei nehunhu hwake.
Kuremara Skydiving uye nei zvichikwanisika